Wiricheya Cushion Memory Foam muna 16 "- 20" Karman Ergonomic Foam
Ergonomic Yekuyeuka Furo hwiricheya Makuseni
Uyu mubato wewiricheya wakakwenenzverwa kuti unyatsoenderana nechimiro chemuviri wako. Inogona kushandiswa seimwe Kumusana Cushion kana Seat Cushion, ndapota taura. Uyu mutsamiro wakagadzirirwa kurumbidza furemu dhizaini yeiyo Ergonomic mawiricheya, asi inogona kushandiswa pane chero chakaenzana upamhi cheya. Usakanganwa kuwedzera iyo Ergonomic Yakarongedzwa Ndangariro Foam Backrest yemubatanidzwa wekupedzisira wekunyaradza.
Sarudza chisarudzo ... 16 ″ x16 ″ 18 ″ x16 ″ 20 ″ x16 ″ (+ $ 20.00)
CU-ERGO - Ergonomic Memory Foam huwandu
SKU: 810058400901 Categories: Back & Cushion, Kudzoka Makushoni, Cushion Inovhara, furo, Memory Foam, chigaro, Mawiricheya Makushoni, Wiricheya Upholstery & Zvigaro Tag: masisito
Wiricheya Cushion Memory Foam UPC #